खेलकुद खबर – Page5– rastriyakhabar.com
गोकर्णेश्वरमा शंखडोल डोजो हलको उद्घाटन (फोटो फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा शंखडोल डोजो हलको उद्घाटन भएको छ । प्रदेश न. ३ को आर्थिक सहयोग र स्थानीयको पहलमा निर्मित उक्त डोजो भवन क्षेत्र न. ३ का प्रतिनिधि सभा सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सांसद रामेश्वर फुँयाल, सांसद छिरिङ दोर्जे लामा र नगर मेयर सन्तोष चालिसेले सयुक्त रुपमा उद्घाटन..
एन्फाको नक्कली लोगो प्रयोग गरी टिसर्ट बनाएर बिक्री गर्ने ६ जना पक्राउ
आइतवार, असार ८, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को नक्कली लोगो प्रयोग गरी टिसर्ट बनाएर बिक्री गर्ने ६ जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँको नयाँबजार बस्ने बाग्लुङ जयमुनी नगरपालिका–९ का २९ वर्षीय चन्द्रदत्त शर्मा, काठमाडौँ खुसिबुस्थित बिआरके सप्लायर्सका सञ्चालकद्वय रुपन्देहीका ३६ वर्षीय विष्णुप्रसाद कँडेल..
विश्वकप क्रिकेटमा आज आयोजक इंग्ल्यान्ड र अफगानिस्तान बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । म्यान्चेस्टरमा आज नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा इंग्ल्यान्डले अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । इंग्ल्यान्ड चौथो जितको खोजिमा छ भने अफगानिस्तान पहिलो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ । अफगानिस्तानले..
विश्वकप इतिहासमा वेस्ट इन्डिजविरुद्व बंगलादेशको पहिलो जित
लण्डन । बंगलादेशले विश्वकप क्रिकेट इतिहासमा वेस्ट इन्डिजविरुद्व पहिलो जित हात पारेको छ । सोमबार भएको खेलमा बंगलादेशले वेस्ट इन्डिजविरुद्व सात विकेटको जित हात पारेको हो । सन् १९९९ देखी विश्वकप खेल्न थालेको बंगलादेशले दुई पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिजविरुद्व विश्वकप क्रिकेटमा यसअघि चार पटक..
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ । उक्त विधेयकअन्र्तगत आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूद, शहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो । बैठकमा भाग लिँदै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले विकास खर्चलाई सही ढङ्गले अगाडि..
युरोपियन क्लब फुटबलको ‘ड्रिम टिम’मा मेस्सी र रोनाल्डो
एजेन्सी । बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई समेटेदै युरोपियन क्लब फुटबलको ‘ड्रिम टिम’ सार्वजनिक गरिएको छ । फुटबलको वेभ साइड गोल डटकमले सार्वजनिक गरेको युरोपको शीर्ष पाँच लिगको ड्रिम टिममा मेस्सी र रोनाल्डो परेका हुन् । दुवैले अग्रपंक्ति सम्हाल्नेछन् ।..
गौरिकासहित चार खेलाडीले विश्व च्याम्पियनसिप खेल्ने
काठमाडौं । कोरियाको ग्वाङ्गजु सहरमा आयोजना हुने १८ औं फिना विश्व पौडी च्याम्पियनसिपका लागि बुधबार चार खेलाडी छनोट गरिएको छ । च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ गौरिका सिंह र सोफिया शाह तथा पुरुषतर्फ शुभम श्रेष्ठ र एलेक्सजेन्डर शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गरेको..
मेचीनगर गोल्डकपको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबको पोल्टामा
काँकडभिटा । सडनडेथमा भाग्यमानी सावित हुँदा मेची नेत्रालय मेचीनगर गोल्डकपको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबको पोल्टामा परेको छ । सडन डेथमा पुलिसका खेलाडी मानबहादुर परियारले प्रहार गरेको बल त्रिभुवन आर्मी क्लबका गोलरक्षक बिकेस कुथुलाई ठोक्किदै जाली चुमेको थियो । प्रतियोगितको बिजेता पुलिसले १० लाख १ हजार..
विश्व कप क्रिकेटका लागि १० वटै सहभागी राष्ट्रले टिम घोषणा
काठमाडौं – अर्को महिनादेखि इङ्गल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुन लागेको पुरुष विश्व कप क्रिकेटका लागि १० वटै सहभागी राष्ट्रले टिम घोषणा गरिसकेका छन् । यो वर्षको विश्वकपमा कतिपय टिमले पुरानै खेलाडीलाई स्थान दिइरहँदा केही टिमहरुले भने युवा खेलाडीलाई पनि स्थान दिएका छन् । १० देशमध्ये ५..
दिल्ली क्यापिटल विजयी
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल विजयी भएको छ । रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर (आरसीबी) माथि दिल्लीले १६ रनको जित निकाल्दै दिल्ली आईपीएलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलको प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ..
बाँके - बाँकेमा जारी आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रिकेट तर्फ एपिएफले बाजी मारेको छ । बाँकेको कोहलपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको फाईनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजीत गर्दै एपिएफले उपाधिमाथी कब्जा जमाएको हो । त्यसैगरी महिला विधामा समेत एपिएफले बाजी मारेको छ । कोहलपुर क्रिकेट..
दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडी डाले स्टेन्ली आईपीएल नखेल्ने
एजेन्सी– विश्वकप क्रिकेट शुरु हुन एक महिनामात्रै बाँकी हुँदा दक्षिण अफ्रिकाका तीव्र गतिका बलर डाले स्टेन्ली सोल्जर इन्जुरीको समस्यामा परेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको विश्वकप टोलीमा अटाएका उनको दाहिने हातको सोल्जरमा चोट लागेपछि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) बीचमै छाडेर दक्षिण अफ्रिका फर्किएका छन्..
काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा खेलकूदको संस्थागत विकास गर्न विसं २०१५ मा राष्ट्रिय..
एकदिवसीय क्रिकेटको वरीयतामा नेपालले एक स्थान सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को एकदिवसीय क्रिकेटको वरीयतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ । आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको हो । नयाँ वरीयता अनुसार नेपाल १४ औं स्थानमा रहेको छ । यसअघि नेपाल १५ औं स्थानमा रहेको थियो । टी-ट्वान्टी वरीयतामा पनि नेपाल..
मेस्सीको दुई गोल सँगै बार्सिलोना सेमिफाइनलमा
काठमाडौं - अर्जेन्टाइन फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी महान् खेलाडीको उपमातर्फ अगाडि बढ्दै गएका छन् । उनको व्यवसायिक क्लब स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाईनलमा प्रवेश गर्दा मेस्सीकै गोलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । इंगलिश क्लब म्यानचेष्टर युनाईटेडलाई पराजित गर्दै..